Andrianainarivelo Hajo: « Mahantra noho ny fitiavan-tenan’ny mpitondra ny firenena » | NewsMada
Andrianainarivelo Hajo: « Mahantra noho ny fitiavan-tenan’ny mpitondra ny firenena »
Naneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo. Anisan’ny nambarany ny momba ireny fotodrafitrasa samihafa ireny sy ny fahantran’ny vahoaka…
“Latsaka anaty lavaky ny fahantrana lalina ny firenena noho ny fitiavan-tena, ny fitiavan-kely, ny tsy fahalalana onona amin’ny fitadiavana tombontsoa manokana, ary ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra nanomboka tamin’ny taona 2013”, hoy izy tao amin’ny tranonkalam-pifandraisana, omaly. Nohitsiny fa zary lasa tandra vadin-koditra ho an’izao fitondrana izao ny fahantrana sy fijaliana, toa iniana hapetraka.
Ankoatra izany, nambarany fa ekena tokoa ny tokony hifaliana sy hiarahabana ny fahavitan’ireny fotodrafitrasa ireny. Tena ilaina tokoa eto amin’ny firenena, mbola tena ao anatin’ny tsy fahampiana tanteraka raha resaka fotodrafitrasa hifamezivezena, toy ny làlana sy tetezana. “Na izany aza, azo avela sy hodian-tsy hita ve ny fihetsika feno fireharehana sy fiheboheboana nataon’ny mpitondra raha nitokana ny tetezan’i Kamoro ohatra izy. Mbola vola nindramina avy amin’ny mpandoa hetra vahiny namantsika anefa ny fanamboarana izany ary hipetraka ho trosa, hobaben’ny taranaka ?”, hoy ihany izy.
Firenena afaka handray an-tanana ny hoaviny
Nanteriny fa tsy afaka hirehareha sy hifaly isika fa mahavita raha tsy fotodrafitrasa napetraka vokatry ny hatsembohantsika ary naorin’ny orinasantsika no hotokanantsika. “Tena mariky ny fahavononana sy finiavana hanatratra ireo tanjona amin’ny fampandosoana sosialy sy toekarena izany. Tsy sanatria filam-boatsihary na hambopom-pirenena diso toerana izany, fa fitiavana hahita ny firenena malagasy afaka handray an-tanana tanteraka ny hoaviny amin’ny alalan’ny fahaiza-manaony sy tena fitiavan-tanindrazan’ireo mpandraharaha malagasy”, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo.